Bentley Systems - SIEMENS: istaraatijiyad loogu talagalay shabakadaha internetka - Geofumed
Bentley Systems - Siemens: istiraatiijiyad A loogu talagalay in Internet waxyaalaha
Febraayo, 2017 Featured, Microstation-Bentley
Bentley Systems bilaabay ganacsi qoys waqtiga sano ah 80 markii hal-abuurnimo farsamada qaaday kuwa mabaadi'da on taas oo quruunta American, halkaas oo ka duwan dalalka kale Visionär, shaqo adag iyo samayn wax sax yihiin ku dhowaad ballan qaaday guusha.
In dalalka of macnaha Hispanic, boqolkiiba sare ee ganacsiga qoyska ma noolaadaan qarnigii saddexaad oo aabbihiis ku aasaasay shirkadda iyo dib u jabiyay saacadood 16 shaqada maalintii, carruurta ku barato waxa waalidiinta ay go'aansadaan in ay ka qayb qaataan oo ay taageeraan dadaalka Waxay arkeen waalidkood; Carruurteyda qashin waxay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka waxayna go'aansadaan in ay maalgaliyaan ilaha edbinta kale.
Dhawr jeer ayaa waxaan ku fikirayay on this, mar kasta oo ku dhow shirka Gregg Bentley hadla indhihiisa ka badan erayada uu la, sida macno u tahay in la arko dad u waxyoonay dadaal afar cusub baxay walaalo ah college. Inta lagu jiro sanadihii ugu dambeeyay 4, jalayaashii soo-saarka la soo-jeediyay ayaa ka hadlay goobaha fursadaha, ka dib markii ay arkeen Trimble, Microsoft, Siemens iyo TopCon oo ka wada-qaybgalayaashu cusub. Laakiin waxaan mar walba soo gaarnay heer ah in CEO a noqday nidaamka qalliinka ah maamulka muuqaallo kale ee technology ah oo ku saabsan taas oo loogu iyo hawl ku ad-injineernimada ah shirkadaha ugu dhow ee kaabayaasha Top 500, waa in ay fikir wanaagsan Wanaagsan inaad kaydsato kaydka suuqa suuqyada iyo ka fariisto si ay ugu raaxaystaan ​​dadaalkooda.
Tusaalaha aan horay u aragno SIEMENS, oo ah shaqo wada shaqeyn dhowr sano ah. Saamiyada waxaa loo iibiyaa xaalad aad u heer sare ah; Bentley waxay kaliya ku sameeyneysaa shirkadahaas doonaya inay bedelaan qalabkooda barnaamijka oo ay haysteen wakhti ku filan iyo rabitaan wanaagsan si ay u muujiyaan inay yihiin waxa kaliya ee ay u baahan yihiin. Hadda waxaan fahamsanahay in dhowr ka mid ah iibsiyada Bentley ee sanadihii la soo dhaafay ay qayb ka ahaayeen diyaarinta waxa SEIMENS u baahan tahay.
Xiriirka guusha-guuleysiga waa mid aad u xiiso badan. Lacagta SIEMENS ku maalgelin lahayd horumarinta barnaamijka iyo dayactirka waxaa lagu maalgelin doonaa qalabka Bentley Systems, kaas oo soo saari doona faa'iidada halbeegga tallaabo halista ah. Dhinaciisa, Bentley Systems wuxuu ku guuleystey macmiil ah oo ah 232 marar badan (faa'iido sannadle ah), ka qaybqaadashada qaybaha kala duwan ee Geo-engineering.
Ma fileynin wax ka yar; ganacsigu markiiba wuxuu ku salaysan yahay maalgashiga joogtada ah ee SIEMENS ee teknoolojiga ah in Bentley Systems ay sameeyaan heer aragti ah oo diiradda saaraya Internet-ka Waxyaabaha (IoT) iyo caqabadaha heerka heerka BIM 3. Xaqiiqdii waa nooc cilladaysan; shirkad in uu ku dhashay 1984, jeer 150 shaqaalaha ka yar, waa inay awoodaan inay sameeyaan leh kiimiko ah oo uu jiray tan iyo 1,847 200 la hawlgallada ee dalalka warshadaha, tamarta, qaybaha caafimaadka, kaabayaasha iyo magaalooyinka. Mid ka mid ah soo saara oo shaqeeya adeegyada, kuwa kale waxay horumariyaan qalabka ay u baahan yihiin.
In la sii wado model this, waan arki doonaa in dhawr sano boqolkiiba ka hooseeya 50% of Systems Bentley qaybiyey ugu yaraan kuwan qaybood oo waaweyn: Qaabaynta, oo waxaannu aragnay ayaannu ka joogitaanka Trimble iyo Topcon, Microsoft, waayo xogta kaabayaasha la Azure iyo SIEMENS ee hawlgalka tiknoolajiyadaan ee qalabyada ku xiran guryaha iyo warshadaha.
Marka la eego, istaraatiijiyada Bentley ee ah inay joojiso in ay noqoto shirkad ay maamusho koox walaalo ah ayaa loo arki karaa iyada oo la raacayo shaqaalihiisa fulinta. Qorshahoodu waa inay muddo dheer sii joogaan, halka ay ku wareejiyaan saamileyda saamiyada shirkadaha dhabta u leh danaha ka qaybgalka ka baxsan dhaqaalaha.
Internet-ka, tani maahan istaraatiijiyad keliya. Dhinaca kale, dhismaha weyn ee dhismaha HEXAGON, oo si tartiib tartiib ah u heleen qalabka ay ku jiraan wareegga AECO oo dhan. Qaabka Bentley wuu ka duwan yahay, iyadoo lala socdo qaar ka mid ah ciriiriga sababtoo ah inkastoo SIEMENS ay leedahay qayb ballaadhan, hadda wada shaqeyntu waxay ku jirtaa maareynta kaabayaasha ee qaybta korantada; Waxba kama horjoogsanayaan in ay tagaan qaybaha kale. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la arko jawaabta HEXAGON ee soo daahday maamulka xilliyada tareenada, istaraatiijiyada Bentley si loo bedelo nidaamka Boqortooyada Ingiriiska ka dibna iibsato shirkada oo dhan oo ka shaqeysa inta badan nidaamka tareenka ee Yurub.
Sidoo kale waa inaan aragnaa waxa ku dhacaya AutoDesk, taas oo shaki ku abuuraysa is-casilaadii CEO-ka iyo qaar badan oo ka mid ah madaxda sare ee bilihii lasoo dhaafay. Inkastoo AutoDesk uu qayb ka yahay suuq kale, isagoo noqonaya shirkad dadweyne ayaa micnaheedu yahay in ficil kasta oo ka dhigaya ka qaybqaadashadiisa khatarta uu sababi karo tallaabooyinkeeda inay dhacdo; Sidaa daraadeed wada-hawlgalayaasha istaraatiijiyadeed ee ka dhiga hannaanka ay ku bahoobeen aragtida IoT.
Post Previous«Previous Nidaamka Qaran ee Property Management SINAP
Post Next dhiismeedkaNext »